Arsenal oo u gudubtay wareegga semi-finalka FA Cup-ka kaddib guul ay ka gaartay Sheffield United – Gool FM
Arsenal oo u gudubtay wareegga semi-finalka FA Cup-ka kaddib guul ay ka gaartay Sheffield United
(London) 28 Juun 2020. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa iska xaadirisay wareegga afar dhammaadka tartanka FA Cup, iyagoo garaacay kooxda Sheffield United.
Gunners ayaa qaybtii hore ee ciyaarta hoggaanka ku qabatay rigoore uu dhaliyay Nicolas Pepe daqiiqaddii 25-aad, waxaana qaybtii hore lagu kala nastay 1-0.
Balse markii dib la isugu soo laabtay, naadiga Sheffield ayaa bandhig wanaagsan la timid, waxaana ay dhowr jeer sigeen goolka Arsenal, iyagoo ugu dambeyn goolka bareejada ka helay David McGoldrick daqiiqaddii 87-aad ee ciyaarta.
Si kastaba ha ahaatee, ciyaarta oo dhammaad ah, isla markaasna labada tababare ay ka fikirayaan qorshahooda waqtiga dheerriga ah ayaa Dani Ceballos waxa uu kooxdiisa gacanta u galiyay goolkii guusha kaddib markii uu shabaqa gaaray daqiiqaddii 90-aad ee ciyaarta.
Ciyaarta ayaa kusoo idaalatay 2-1 oo ay ku adkaatay Arsenal, waxaana ay wareegga nus-dhammaadka kula biireen Manchester United oo xalay natiijadan oo kale kaga adkaatay naadiga Norwich City.
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Leicester City iyo Chelsea ee tartanka FA Cup-ka oo la shaaciyay